Iza moa i Spencer Elden? Baby avy amin'ny rakitsary 'Nevermind' manarona fitoriana an'i Nirvana - Pop-Kolontsaina
Iza moa i Spencer Elden? Baby avy amin'ny rakitsary 'Nevermind' manarona fitoriana an'i Nirvana
Ilay zaza efa lehibe avy amin'ny zava-kanton'ny cover of Nirvana's malaza Tsy maninona ka Ny rakipeo, Spencer Elden, dia nitory ny miaramila iray toko ho an'ny fanararaotana ankizy. Spencer Elden no zazakely nalaina sary tao anaty dobo filomanosana tamin'ny rakitsary album Nirvana 1991.
30 taona taorian'ny nilatsahan'ny rakikira dia manenjika ireo mpikambana velona amin'ny tarika sy ny fananan'i Kurt Cobain i Spencer izao. Tamin'ny fanenjehana federaly vaovao azon'ny TMZ dia nilaza i Spencer fa tsy afaka nanaiky ny hampiasana ny sariny tao amin'ilay rakikira izy tamin'izany fotoana izany satria zazakely efa-bolana izy ary tsy nanaiky izany ireo mpiambina azy ara-dalàna.
Zazakely teo aloha voasongadina amin'ny rakotra rakikira Nirvana Iconic, Spencer Elden, bandy miangavy ho an'ny pôrnôn-jaza https://t.co/605yc6DZyP
- Rick Montanez (@RickCBSLA) 25 aogositra 2021
Tao anatin'ilay fitoriana dia nilaza ilay rangahy efa lehibe fa ny sary dia zaza p * rnography. Nambarany fa nanome toky ny tarika fa hosaronany sticker ny faritra tsy miankina aminy saingy tsy natao tao amin'ny fonony farany.
Nilaza i Spencer Elden fa tsy niaro sy nisakana azy tsy hohararaotina i Kurt, Dave Grohl, ary ireo mpikambana hafa. Nanampy izy fa ny fananany ny vatany mitanjaka ao anaty rakikira malaza dia nahatonga azy hijaly nandritra ny androm-piainany. Tiany handoa vola $ 150,000 ny tarika sy ny fananan'i Kurt Cobain.
Ny zava-drehetra momba an'i Spencer Elden
Ny tarika Nirvana (Sary avy amin'ny Getty Images)
Teraka tamin'ny 7 Febroary 1991, i Spencer Elden no zazakely avy amin'ny fonony Nevermind. Volana vitsivitsy izy rehefa nahazo antso avy amin'ny mpaka sary anaty rano Kirk Weddle ny ray aman-dreniny mba hanontany raha afaka mampiasa ny zaza vao teraka izy ireo ho toy ny ampahany amin'ny photoshoot ho an'ny tarika ho avy.
Ny dadan'i Spencer dia zatra nanampy tamin'ny seta, fanodikodinam-bola ary fitaovana manokana ho an'ny photoshoots, ary lasa mpinamana tamin'i Kirk. Namerina namerina ny photoshoot imbetsaka i Spencer ary nanao tatoazy namaky Tsy maninona ka eo amin'ny tratrany.
Nilaza i Spencer Elden fa mbola tsy nifehy tanteraka ny fisiany tamin'ny rakitsary rakikira izy. Nilaza mihitsy aza izy fa somary sosotra ary nanandrana nanatona ny tarika fa tsy nahazo valiny mihitsy. Nifoha izy satria tafiditra tao anatin'ny tetikasa goavambe iray, ary nilaza izy fa toy ny hoe malaza tsy misy dikany izy ary tsy dia ankasitrahana mihoatra ny bika aman'endriny ao amin'ilay rakikira.
I Spencer Elden izao dia nitory ireo mpikambana ao amin'ny tarika Nirvana sy ny fananan'i Kurt Cobain mikasika ny sary nampiasaina tao amin'ilay rakikira. Tsy mbola naneho hevitra momba izany ny solontenan'ny fananan'i Nirvana sy Kurt Cobain.
Vakio ihany koa: Anjerimanontolon'ny polisy fizarana faha-6: Sun-ho manelingelina ny fahafaha-mandeha miaraka amin'i Kang-hee, tafiditra anaty olana lalina kokoa
rahoviana no handefa SMS amin'ny tovovavy aorian'ny daty voalohany
tononkalo momba ny lanitra sy ny olon-tiana
ahoana no atao hoe olona mahalala fomba
rehefa misy bandy misintona inona no dikan'izany
sosotra amiko foana ny vadiko
toerana mahafinaritra aleha miaraka amin'ny namanao akaiky indrindra